Yitsho igama lam ngo-Destiny's Child - Izinto Zobugcisa
Yitsho igama lam ngo-Destiny's Child
Oku malunga nomfazi ofuna ukuva isoka lakhe lithetha ngothando kuye kuba ekrokrela ukuba usegumbini nomnye umfazi. Uthi, 'Xa kungekho kuwe, uthi' Mntwana, ndiyakuthanda 'Kutheni udlala imidlalo?'
IMarquis -Washington, DC
Amalungu amabini e-Destiny's Child-uLeTavia Roberson kunye noLeToya Luckett-bacule kule mzila kodwa khange bavele kwividiyo. Ukutshintsha kwabo-uFarrah Franklin kunye noMichelle Williams-bavele endaweni yoko. UFranklin wagxothwa kwiinyanga ezimbalwa kamva kwaye iqela laqhubeka njenge-trio.
U-Luckett noRoberson batyhola ukuba bebengazi ukuba bangaphandle kweqela de babone uFranklin noWilliams kwividiyo.
Ngo-2000, oku kwaphumelela iGrammys yeeNgoma ezigqwesileyo zeR & B kunye neNtsebenzo yeR & B ephezulu ngeDuo okanye kwiQela.
Kudliwanondlebe kunye no-2008 Ubulungisa bePapa , UKelly Rowland utyhile ukuba le yeyona ngoma yakhe ayithandayo yengoma yomntwana. Uye wathi, 'Kwakumnandi kakhulu ukurekhoda kwaye sawela ngale ngoma kwihlabathi elitsha kwaye yayimangalisa kuthi. Abaphulaphuli bethu baba baninzi. '
Ividiyo, ephumelele ngeyona Vidiyo i-R & B ibalaseleyo kwiiMbasa zeMidlalo zeMTV zeMTV, ibikhokelwe nguJoseph Kahn, othe wanceda inyuselo ye'Jumpin 'Jumpin.' '
Eli qela labhala oku noLaShawn Daniels, uFred Jerkins III noRodney Jerkins - ikwangulaa qela lalixakekile lilungiselela uJennifer Lopez ukuba acule kulo nyaka kwangoko ngengoma yakhe yokuqala ethi 'Ukuba Unothando Lwam.'
URodney Jerkins wayesebenza eLondon kunye neThe Spice Girls; Le yayiyindlela yokuqala ayenzileyo xa ebuyela eMelika. Uxelele Ishishini lomculo kwihlabathi liphela kudliwanondlebe luka-2019 ukuba yingoma yakhe ayithandayo awakhe wayivelisa. 'Baninzi abantu ukuza kuthi ga namhlanje bacule le ngoma kum, utshilo uJerkins.
Ndiyenzile indlela yam frank sinatra
abanye bathi uthando ngumlambo
sinendlela ende yokuhamba kunye nexesha elifutshane lokufika apho amazwi omculo
rianna nceda ungawuyeki umculo
pentatonix mary, ubusazi? Olunye ushicilelo lwengoma